Iceland: Waxay ugu horaysaa sinaanta ragga iyo dumarka ' laakiin wax badan ayaa dhiman' - BBC News Somali
Iceland: Waxay ugu horaysaa sinaanta ragga iyo dumarka ' laakiin wax badan ayaa dhiman'
Image caption Svanhilden Hjaltadottir oo ka shaqaysa dukaan dalka Icelandic ayaa sheegtay inay dumarka haystaan xoriyad wayn
Ma dhacdo mar walba in Iceland ay ugu horayso adduunka waxyaabo badan.
Markii ay si fiican wax ugu guulaystaan aad ayay ugu faanaan.
Wariyaha BBC ee Colletta Smith ayaa booqatay Iceland si ay wax uga ogaato sababta uu waddanka u yahay meelaha ugu fiican ee dumarka ay ka shaqeeyaan kuna noolaadaan.
Waxay u egtahay xoriyada dumarka reer Iceland inay ahayd mid waqti badan soo jirtay.
Svanhilden Hjaltadottir waxay ka shaqaysaa dukaan lagu iibiyo alaabada hadiyadaha, oo ka mid ah dukaamada hadiyadaha laga iibsado ee magaalo madaxda Reykjavik.
"Xoog baan leenahay, waxaan jecelnahay inaan sidaan rabno wax u samaysano" ayay sheegtay.
Image caption Iceland ayaa leh dumarka ugu badan ee shaqeeya
Qof walba oo aad la hadashid magaalada Reykjavik, wuxuu ogyahay meesha ay Iceland kaga jirto liiska adduunka ee sinaanshaha ragga iyo dumarka ee ay soo saaraan World Economic Forum, waxayna nambarka koowaad ku jirtaa sanado dhowr ah.
UK ayaa ku jirta kaalinta labaatanaad.
Waxaa jira sababo badan in Iceland ay ugu horayso liiska sinaanta ee adduunka. Tusaale ahaan, 88% dumarka Iceland ayaa shaqeeya.
Kontankii sano ee la soo dhaafay, labaatankii sano ee u danbeeyay waddanka wuxuu lahaa dumar xukuma, 40% shirkadaha madaxdooda waa inay noqdaan dumar.
Laakin inkastoo ay ku lahaayeen qayb xoog leh bulshada taariikh ahaan, 1970 -yadii sinaan dhinaca shaqada lama gaarin ilaa ay dumarka ay iyaga qaadeen talaabooyin.
Shaqo joojin waddanka oo dhan
Shaqa joojin waddanka oo dhan oo ay dumarka reer Iceland sameeyeen ayaa dhacday 24 Oktobar 1975.
Si aan la mid ahayn banaanbaxyada adduunka kumanaan dumar ah ayaa isugu yimid bartamaha Austurvollur, kumanaan kale ayaa joojiyay shaqooyinkii, oo ay ku jirto shaqooyinka guryahooda ay ka qabtaan.
Lahaanshaha sawirka Women's History Archives
Image caption Dumar iyo carruur ayaa ka qayb qaatay banaanbixii dumarka ee waddanka Iceland oo dhan ee ugu horeeyay ee dhacay 24 Ockober 1975
90% dumarka Iceland ayaa shaqooyinka oo dhan oo ay ku jiraan shaqooyinka guryaha, waxayna keentay saamayn wayn. Sanado gudahood Iceland ayaa dooratay madaxweynihii ugu horeeyay ee dumar ah.
Dumarka sida Ashildur Bragadottir, oo ka qayb qaatay waxa looga yaqaano Iceland maalintii ugu horaysay ee " Maalinta dumarka aysan shaqayn", ayaa ahayd bilowga hab dhaqaale iyo siyaasad.
" Waan yaraa markaas laakiin si fiican ayaan u xasuustaa, waxaan xasuustaa inaan dareemayay farxad wayn wixii aan ku guulaysanay oo aad ii qaaday.
"Shan sano kadib, 1980, Vigdís Finnbogadottir ayaa ahayd madaxweynihii ugu horeeyay oo dumar ah adduunka oo si dimoqraadi ah loo doorto, sanadkii 1982 diina waxaa la sameeyay xisbiga dumarka (Kvennalistinn)."
Iceland waxaa ku nool dad yar marka la barbardhigo adduunka, laakiin dumar iyo rag dadka Iceland ku nool ayaa aad ugu dadaalay in dumarka ay ilmo dhali karaan ayna shaqayn karaan.
Image caption Ashildur Bragadottir (midig) ayaa ka qayb qaadatay banaanbixii waynaa ee 1975. Gabdhaheeda ayaa lagu soo koriyay inay leyihiin xuquuq iyo fursado la mid ah tan nimanka.
Meelaha carruurta lagu hayo oo raqiis ah oo tayadooda ay fiican tahay, dadaalo nimanka ay ku qaataan fasax markii ay dhalaan carruur iyo 40% in madaxda shirkadaha ay dumar ahaadaan ayaa samayn wayn ku yeelatay shaqada dumarka reer Iceland.
Halka dumarka intooda badan ay haystaan shaqooyin, waxay guud ahaan leeyihiin ilaa laba carruur.
Laakiin gabadhaha Ashildur, oo hadda ah dhowr iyo labaatan jiro, ayaa dareemaya in wali loo baahan yahay in wax badan la qabto.
Unnur Jona, oo ah 21, ayaa sheegtay "Iceland waa waddan yar oo waxbarashadeedu sarayso xuquuqda dumarkana waa wax laga hadlo siyaasada gudaheeda iyo warfaafinta.
"Waxaan ku soo kornay inaan yeelano fursada iyo xaquuqda ay nimanka leeyihiin oo kale mar walba, laakiin waxaan ognahay inaysan jirin wali.
Wali waxaa jira sinaan la'aan aan la micnayn ee ragga iyo dumarka, walina waxaa jira dumar yar oo madax ka ah shirkadaha ganacsiga guud ahaan."
Lahaanshaha sawirka iStock
Image caption Shirkadaha ayaa laga doonayaa inay yareeyaan sinaan la'aanta dumarka iyo ragga
Dumarka Iceland wali waxay qaataan 14% lacag ka yar tan nimanka ay qaataan.
Dalkan UK, faraqa u dhaxeeya dumarka iyo ragga lacagta ay qaataan ayaa ah 18%, iyagoo samaynaya shaqo isku mid ah.
Marka maxay doonayaan inay ka qabtaan dumarka reer Iceland arrintan? Way mudaaharaadaan.
Sanad walba waxay ka tagaan shaqooyinkooda iyo guryahooda maalinta 24 Oktoobar, iyagoo isugu imanaya fagaaraha Reykjavik central square, mar kale. Iyagoo aan ka aamusnayn isbadalka ay doonayaan, laakiin si aad loo maqlayo u waydiisanaya.